सन्नीसँग आइटम नाच्न मानेनन् सलमान - VOICE OF NEPAL
सन्नीसँग आइटम नाच्न मानेनन् सलमान
२८ चैत्र २०७५, बिहीबार १३:०० 210 ??? ???????
बलिउड नायक सलमान खान स्टारर चलचित्र ‘दंबग ३’को अहिले धमाधम छायांकन भैरहेको छ । चलचित्रमा एक आइटम नम्बर पनि समावेश गरिने छ । उक्त गीतमा आइटम नाच्नका लागि निर्माण युनिटले सन्नी लियोनीलाई छनोट गरेको थियो । तर, सलमानले सन्नीलाई नकारेका छन् ।
सलमानले सन्नीले भन्दा राम्रो माउनी रोयले गर्ने भन्दै माउनीलाई आफ्नो प्रोजेक्टमा लिन सुझाएका छन् । माउनी रोयले यस अघि चलचित्र ‘केजिएफ’को ‘गली गली’ बोलको गीतमा आइटम प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
निर्देशक प्रभु देवा र निर्माता अरबाज खानले सलमानलाई नसोधी सन्नी लियोनीलाई लिने निर्णय गरेका थिए । तर, सलमानको उक्त सल्लाह पछि उनीहरु सन्नीलाई नलिएर माउनीलाई लिने पक्षमा पुगेका छन् । चलचित्रमा समावेश उक्त स्पेसल नम्बरको छायांकन छिट्टै गरिने निर्माण युनिटले बताएको छ ।
प्रकाश सुपतको शम्भु राईलाई पत्र– सामान्य अंकमा पास हुनेको के भ्यालु हुन्छ र ?
गायिका सरिता श्रेष्ठ र राजन श्रेष्ठले ल्याए ”प्यारो ओखलढुङगा” ( भिडियो सहित )
लोक गायक रामप्रसाद खनालकाे ‘दुलाहा दुलही’